Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-enye ngwaahịa | China ngwaahịa Factory
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ MAX-930T
Nkọwa ngwaahịa: Njirimara 1.Adopt PLC dị mfe ịgụ, ngosipụta dị elu na-arụ ọrụ dị elu nke gosipụtara ọsọ, ọnọdụ okpomọkụ, ọrụ na mmemme karịa nke ọma. 2.Automatic okpomọkụ akara, elu kwụsie ike, okpomọkụ fluctuations ± 1 ℃, elu okpomọkụ mkpu imewe, nchebe nke okpomọkụ anwụrụ. 3.Use elu na ala mgbali nnyefe yinye nnyefe nnyefe, akpaka na-akwụ ụgwọ mebere ọnọdụ, akpaka Micro-ichighaazu ọrụ, belata nsogbu blan ...
Ultrasound Fusion Edge Cutting Machine (Pụrụ Iche maka Uwe na Bra) MAX-C208
Ngwa kindsdị dị iche iche nke eriri fiber chemical, akpụkpọ anụ dị iche iche, akwa ndị na-abụghị ndị a kpara akpa. Thermoplastic film, chemical plastic mpempe akwụkwọ, wdg Pụrụ iche maka traceless uwe ime na efe ara. Njirimara Na mgbakwunye na usoro 20KHz n'ozuzu, anyị nwere ike imepụta usoro 15KHz na ike site na 1000w ruo 2500w iji mesoo PP, Pee ihe ndị dị nro, nnukwu nnukwu dayameta na nnukwu ọrụ ogologo oge iji gboo mkpa ndị ahịa, A na-etinye ya na ụlọ ọrụ nke plastic ụmụaka, electronic, hous ...
Ultrasound Rubber Edge Machinecha Machine MAX-2602
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Ogologo, ọsọ na nrụgide na-achịkwa elektrọnik, nkenke na ikwughachi usoro njikọta, ọtụtụ ihe gbazee na-ekpo ọkụ, akwa laminated, akwa, nwere ike iji. Nka na uzu Nka Voltaji: AC200-240V / 50-60Hz Ike niile: 2000W ike Ultrasound: 850W Ultrasound ugboro: 18-20K Nhazi ọsọ: 0.5-10m / m ...
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Kwesịrị ekwesị maka ịkwado isi nkwonkwo, nrụgide na oge nwere ike gbanwee iji mezuo ihe dị iche iche chọrọ. Nka na ụzụ teknụzụ Speed: 0.5-10m / min Oru ọrụ: 1-10mm Oge ọrụ: 35KHz Nrụ ọrụ: 0.5Mp
Enweghị nsogbu Broadside Machine (max 6cm New) MAX-910-B1
Enweghị nsogbu Sịlịnda Jointing Machine MAX-920
Ngwa Ngwa uwe nwanyị na-enweghị nke a na-enweghị, uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, sọks nkwonkwo ụkwụ na-enweghị ntụpọ, akwa mmiri na-enweghị enweghị isi, uwe elu egwuregwu, jaket n'èzí, uwe ndị na-agba ígwè, ụlọikwuu na ihe ndị ọzọ. Njirimara Uper na obere rollers na-agba ọsọ ọsọ iche, 10shrinkage mmemme ebe nchekwa nwere ike ịchekwa, nkwado ndabere na mpaghara mgbanwe maka kpo oku tankị okpomọkụ, ala mgbali bụ kemeghi, ihuenyo mmetụ arụ ọrụ, nhọrọ ndị ọzọ na ọtụtụ ngwa na ngwaọrụ maka mmepụta chọrọ. Nka na ụzụ oke volta: AC 200-2 ...
Enweghị nsogbu Hemming Machine MAX-W900-C
Ngwa Nkedo mgbanaka nke bra bra. Njirimara 3 tent nke onwe ha kpo oku usoro na abụọ igbu ọnụ ọrụ, hụ ngwaahịa kpo oku evenly, onwe ha ụkpụrụ nke na-afụ ikuku olu, na belt mgbali nwere ike gbanwee. Mmetụta aka dị mfe ma kensinammuo. Nka na ụzụ oke volta: AC 200-240V / 60Hz Nri ọsọ: 0-10meter / nkeji Taya obosara: 上 -Up12mm, 下 -Down20mm Ike: 2000W Okpomọkụ: 0-300oC Nrụgide nrụgide: 0.5Mpa